Yakanakisa NEW Electric mota 97035209104/97035209204 kurudyi/kuruboshwe yePorsche 991 981 Panamera Manufacturer and Factory | KTG
ITSVA Electric mota 97035209104/97035209204 kurudyi/kuruboshwe yePorsche 991 981 Panamera
Pane zvakawanda zvinotsiva zvikamu zvauchazoda kutengera mota dzako nekufamba kwemakore, uye mabhureki calipers zvirokwazvo imwe yacho. Pasina mabhureki caliper, ipapo, hapana motokari yaizokwanisa kumira.KTG AUTOtarisa pakugadzira mabhureki zvikamu zveaftermarket. ZvoseKTG Aftermarket Brake Caliper enderera nekuita uye kutsanangurwa kwekutanga OE chikamu.
Parking Brake Actuator ndeye "motor-on-caliper" system inobatanidza Actuator mune caliper yakaiswa pavhiri rekumashure uye inoshandisa Caliper zvakananga pasina yakaparadzana tambo yekupaka. Iyo iripo mvura / tsoka yekupaka lever inobviswa uye basa rekupaka rinokwanisa kuitwa nebhatani riri nyore. Icho chinotevera-chizvarwa chekupaka mabhureki system inopa mutyairi nyore uye kuchengetedzeka nekugonesa inoshanda kutonga kuburikidza nekubatana neiyo control system yemotokari.
Kufambira mberi mune tekinoroji yemotokari kunopa hukuru hwekuita uye akawedzera maficha asi zvakare anogona kugadzira matsva ekutadza modes mune mamwe masisitimu. Electronic parking mabhureki muenzaniso wechishandiso chitsva chinogona kukonzera matambudziko. Aya mabhureki matsva ekupaka anoratidza push-bhatani activation inopesana neyakajairwa pedal uye lever ruoko chimiro chinowanikwa pamotokari dzechikuru. Nepo kureruka kwekushandisa mukuita mabhureki ekupaka kuchiwedzerwa, ndizvo zvakaita mukana wekutadza nekuwedzera mota yemagetsi kuhurongwa. Ikozvino kana bhureki remagetsi ratadza, pane maviri anogona kukanganisa - iyo caliper uye yemagetsi kupaka brake mota. Mutengesi weOE anoda kukutengesera iyo yese unit, asi sei uchibhadhara zvese kana iwe uchingoda mota chete? Isu tine iwe wakafukidzwa neyedu Electronic Parking Brake Motors. Inopihwa nehardware nyowani kuti inyatso kukwira kune caliper, aya ekutanga motors inzira yakasarudzika yeOE pane chidimbu chemutengo.
Zvakapfuura: Parking Brake Actuator
Zvinotevera: Front Passenger Side Racing Brake Caliper Porsche Macan Audi Q5
Stainless Simbi Trailer Hyd...